FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SETTER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Setter
'Bama the Irish Setter amin'ny 11 volana dia tia ny rano, mandeha lavitra , mandeha miaraka aminay rehefa mitaingina bisikileta, milomano, mitaingina fiara sy kamio, fa indrindra hiaraka amiko rehefa mitaingin-tsoavaly aho !! Nafindranay nody ireo soavaly nody tao amin'ny fefy vaovao, ka dia mitondra Bama be dia be miaraka amiko aho! Tena tsara amin'ny sary izy! Mpaka sary aho ka ataony mahafinaritra ny maka sary azy !! Tiany ny mankany PetCo sy PetSmart! Tiany ny gilasy fanosotra dibera, rambony makamba, mofomamy alika, silika miafina ary mofomamy fitsingerenan'ny andro nahaterahana! Ary mazava ho azy halany ny bedy. Nihatsara izy rehefa navelantsika tao anaty kamio na fiara fitateram-bahoaka izy dia fantany fa hiverina isika. Ity karazana alika ity dia tena marani-tsaina tokoa! Raha manam-potoana ianao ary mazoto amin'ny any ivelany dia mety ho anao ity karazany ity !! '
Lisitry ny alika mpiompy irlandey
Red Setter mena
sotar rua (Irlandey ho an'ny Red Setter)
Alika vorona mavitrika ny Setter Irlandey. Ny loha lava mahia dia mahia avo roa heny farafahakeliny ny sakan'ny sofina noho ny halavany. Rehefa zahana avy eo aloha ny ovoho dia taolana ary raha jerena avy any ambony dia somary misy domed. Somary lava kokoa noho ny hahavony ny vatana. Ny motera dia somary lalina miaraka amina fijanonana miavaka. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Ny orona dia mainty na volontany misy vavorony misokatra. Ny maso salantsalany dia miendrika amandy, somary mivelatra ary somary mainty volontany ny volony. Ny sofina telozoro sy ambany dia manify ary manantona akaikin'ny loha. Ny tongotra eo aloha dia mahitsy ary ny tongotra kosa somary kelikely miaraka amin'ny rantsantongony. Ny rambony lava dia saika hahatratra ny volony, matevina kokoa eo am-potony izy, ary mihidy hatramin'ny teboka iray. Ny palitao dia fohy ary tsara eo amin'ny loha sy ny ilany eo anoloana amin'ny tongotra ary antonony amin'ny halavany amin'ny faritra hafa amin'ny vatana. Mbola misy volom-borona lava kokoa aza eo amin'ny sofina, lamosin'ny tongotra, kibo ary brisket, mipaka hatrany amin'ny tratra. Ny lokon'ny palitao dia misy mahogany amin'ny mena-kastnut mena. Tsy misy mainty, fa mety misy fotsy kely eo amin'ny tratra, tenda, rantsan-tongotra ary indraindray misy tadiny afovoany manify eo an-tampon'ny loha. Indraindray ny alika tanora dia mety hanana loko volondavenona volafotsy ao ambadiky ny sofina sy ny tongony izay manjavona matetika rehefa mihalehibe ilay alika.
Ny Seters Irlandey dia mavitrika, manan-tsaina, be fitiavana, be fitiavana, be zotom-po ary be hery. Tsy manana voajanahary miambina izy ireo, mifanerasera amin'ny biby hafa ary tsara amin'ny ankizy. Ity karazana ity dia mety ho tsy miraharaha sy avo lenta raha tsy mahazo ny habetsany fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana ary mety hanjary manimba sy sarotra tantanana. Manetsiketsika, miaraka amin'ny toe-tsaina mahaleo tena, mora tohina amin'ny feon'ny olona iray izy ireo ary tsy hihaino raha mahatsapa izy ireo fa matanjaka kokoa noho ny tompony izy ireo, na izany aza dia tsy handray tsara ny fifehezana henjana. Ny tompon-trano dia mila milamina, kanefa manana rivotra voajanahary amin'ny fahefana voajanahary, matanjaka, matoky tena ary tsy miovaova, manome alalana mazava amin'ny alika tokony harahin'izy ireo sy hifikirany. Tompony malemy paika na mandalo tsy manome fanatanjahan-tena ampy hahitana azy ireo sarotra ampiofanina . nomena fikirakirana mafy ary fanatanjahan-tena be dia be, ireo alika ireo dia mety ho fifaliana hananana. Manomboha fiofanana mafy orina eo am-piandohan'ny fiainana satria mora kokoa ny misoroka ny olan'ny fitondran-tena noho ny manamboatra azy ireo raha vao manomboka mitranga izany. Aza avela ity alika ity mitsambikina amin'ny olombelona , na dia alika kely aza. Ampianaro izy ireo hivezivezy amin'ny firaka ary avelao ny olona hiditra sy hivoaka eo am-bavahady sy eo am-baravarana. Mora amin'ny tranom-bahiny . Misy karazany roa, tsipika an-tsaha ary tsipika fampisehoana (dabilio). Ny karazany an-tsaha dia nompiana ho an'ny asa fihazana sy fitsapana any an-tsaha ary matetika dia kely kokoa miaraka amin'ny palitao fohy kokoa. Ny karazana dabilio dia namboarina ho fampisehoana fampifanarahana. Ireo karazany roa ireo dia mazoto ary mila fanatanjahan-tena isan'andro, fa ny tsipika an-tsaha kosa dia manana haavon'ny angovo avo kokoa ary mila fanatanjahan-tena bebe kokoa. Ny haavon'ny fanapahana amin'ity karazany ity dia miovaova na dia ao anatin'ny fako iray ihany aza. Raha tsy ianao ilay karazan'olona afaka maneho rivotra voajanahary milamina, fa fahefana hentitra, dia aza hadino ny misafidy pup izay mora manaiky kokoa. Ny toetran'ny tsipika fampisehoana sy ny tsipika dia samy hafa be, miankina amin'ny fomba itondran'ny tompony ny alika sy ny ohatrinona ary inona karazana fanatanjahan-tena manome izy ireo. Ny Setter Irlandey dia ampiasaina amin'ny karazana rehetra mihaza . Haingam-pandeha izy io, miaraka amin'ny fofona faran'izay tsara ary mateza amin'ny faritra rehetra sy ny toetrandro, miasa tsara na dia any anaty tany mando aza.
Haavony: Lehilahy 26 - 28 santimetatra (66 - 71 cm) Vehivavy 24 - 26 santimetatra (61 - 66 cm)
Milanja: Lehilahy 65 - 75 pounds (29 - 34 kg) Vehivavy 55 - 65 pounds (25 - 29 kg)
Ity karazany ity mirona amin'ny fivontosana . Mety ho fahendrena ny manome sakafo kely 2 na 3 isan'andro fa tsy lehibe iray. Mora voan'ny androbe, mahazaka aretin-koditra henjana, dysplasia siko sy valahana, hypothyroidism ary olan'ny maso toy ny PRA, aretim-panafody. Tandremo ny aretin-tsofina sy ny fivontosana.
sary mifangaro maltese sy poodle
Ny Setter Irlandey dia tsy asaina amin'ny fiainana an-trano raha tsy hoe mazoto jogging na bisikileta isan'andro ny tompony ary mikasa ny hitondra ny alika miaraka amin'izy ireo. Ity karazana ity dia mahomby indrindra amin'ny tokontany malalaka.
Ny mpikirakira rehetra dia mila maharitra isan'andro, mandeha haingana na jogging na ho lasa tsy milamina sy sarotra tantanana izy ireo. Aza avela handeha eo alohan'ilay mitazona ny firaka ny alika. Ny alika dia tsy maintsy atao ombelahin-tongony eo anilany na ao aoriany, toy ny ao an-tsain'ny alika, ny mpitarika no mandeha voalohany ary io mpitondra io dia tsy maintsy olombelona. Ho fanampin'izany, hankafy ihany koa izy ireo ny mihazakazaka afaka amin'ny fiarovana ny tokotanin'ny fefy.
11-15 taona eo ho eo.
Litters lehibe dia lehibe matetika. Alika kely 8 ka hatramin'ny 12, indraindray bebe kokoa
Ny fanosorana sy ny fikolokoloana ny palitao malefaka, fisaka ary antonony isan'andro no ilaina mba hitazomana azy amin'ny toe-javatra tena tsara. Ataovy afaka amin'ny burrs sy tangles izy, manosotra fanampiny rehefa raraka ny palitao. Mandrosoa sy shampooing maina raha tsy ilaina. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Setter Irlandey dia novolavolaina tamin'ny fampifangaroana ny Terrier Irlanda , Spaniel Rano Irlandey , English Setter , manondro ary ny Gordon Setter . Nantsoina hoe Irlandey Mena Setter tany Etazonia izy io tany am-boalohany. Nisy fotoana ny Irlandy Setter dia alika mena sy fotsy misy tongotra fohy kokoa noho ny karazany ankehitriny. Ny tongotra fohy kokoa dia azo namboarina mba hanampiana ny alika 'hametraka' ny lalao. Niondrika ambany izy ireo teo akaikin'ny vorona mba hahafahan'ny mpihaza mandehandeha ary manipy harato amin'ny haza sy ny alika. Tamin'ny taonjato faha-19, ny fiompiana voafantina dia namokatra alika iray miaraka amin'ny akanjo mena vita amin'ny chestnut ary ny fotsy dia nipoitra avy tamin'ny karazany. Mety ho antitra noho ny English Setter izy io. Ny anglisy sy irlandey mpiorina dia samy razamben'ireo Pointer Espaniola . Ny Irish Setter dia alika fihazana tanjona rehetra, sady mpanondro no miverina amin'ny karazan-tany rehetra. Izy io dia tsara indrindra ho an'ny vorona lalao fihazana. Manana orona tena tsara izy ary haingana be. Rehefa hitan'ny Setter Irlandey ny lalao dia mihazakazaka haingana eo alohan'ilay mpihaza izy mba hanairana azy. Nandritra ny taona maro dia maro ny mpiompy no nanomboka niterahana bebe kokoa noho ny fijery fa tsy ny fahaizan'ny alika mihaza. Ny talenta an'ny Irlandey Setter dia misy ny mihaza, manara-dia, mamerina, manondro, mpiambina, mailaka ary fankatoavana mifaninana.
CCR = fisoratana anarana kanadiana kanadiana
Bama the Irish Setter amin'ny 11 volana
George the Irish Setter ho alika kely amin'ny 2 volana— 'Ity i George, zanako Irlandy Setter zanako roa volana! Vao nahazo azy aho androany ary toa efa tiany ny tranony vaovao! Efa hainy ny mipetraka, ary mbola miasa amin'ny baiko ambany izahay. George dia nahazo ny anarany tamin'ny fianakaviako nifidy izay tianay hanome azy anarana. Ny anarana nanananay dia i George, Seamus, Champ ary Bama. George no nahazo ny vato betsaka indrindra ka izany no niantsoanay azy! Ny naman'i George dia ny mpiandry ondriko alemanina antsoina hoe Jude ary saka Himalayan antsoina hoe Andriamatoa Jinx. Tsy andriko ny hahita an'i George mihalehibe ary alika olon-dehibe salama. :) '
'Ity no zanako Irlandy Setter alika amin'ny 6 herinandro. Ny anarany no Ala B. Tiany ny mandany fotoana amiko, mandeha miaraka amiko ary milalao miaraka amin'ny namany Bama (olon-dehibe Irlandy Setter), manondro zavatra, mandeha miakatra sy midina tohatra, mihazakazaka ary mitaingina ny kamio. Omena tsiny ny tsy fankasitrahany. Ny zavatra tiany hohanina dia ny sakafony (Royal Canine), mofomamy alika avy amin'ny fisotroana PetCo, izay azony alaina ao am-bavany mba hitsakoana, taolana taolan-tehezana hohanin'ny alika sy ny sofina kisoa. Ny kilalao ankafiziny dia kilalao omby mikiakiaka, baolina tenisy, soavaly feno soavaly ary zavatra mety ho azon'ny vavany! Sipa mamy izy! Ho lasa alika tsara tarehy izy rehefa lehibe! '
Ala the Irish Setter ho alika kely amin'ny 6 herinandro mipetraka miaraka amin'ny voninkazo
'Ala ilay zanak'alika Irlandey Setter amin'ny 7 herinandro - amin'ity sary ity dia mieritreritra izy fa Coonhound !! -) Mampihomehy! Miova isan'andro izy! Heveriko fa ho zazavavy lehibe izy! Nilanja 9 lbs mahery izy. amin'ny 7 herinandro !! Ohatry ny mihalava izy isan'andro! Alika mahafinaritra toy izany! '
D'Arcy, Setrika Irlandy tsara tarehy
D'Arcy ilay Irlandey Setter
D'Arcy dia fiompiana Irlandy (teraka sy monina any Irlandy), ary noho izany dia tsy mitondra palitao firy amin'ny karazany amerikana.
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Setter Irlandey
Sary Setter Irlandey 1
Fa maninona no niova mainty ho mavokely ny oron'ny alika?
Alika Setter Irlandey: sary an-tsokosoko voaangona
laboratoara omby mastiff mampifangaro alika kely
mainty sy Tan Amerikana Cocker spaniel
alika fotsy misy maso mainty
afangaro amin'ny husky ny omby iray
Japoney chin pomeranian mix puppy amidy